PressReader - Isolezwe: 2018-05-17 - UZola uzobheka nokubukeka kahle kwabadlali
UZola uzobheka nokubukeka kahle kwabadlali
Isolezwe - 2018-05-17 - EZEMIDLALO - LUNGILE MAJOKA noMINENHLE MKHIZE
UMSEBENZI wokuba yi-Kit Manager ngeminye yebalulekile emaqenjini ebhola. UZola Luthuli osenze lo msebenzi kusukela kwaqala iPremier Soccer League (PSL) kwiManning Rangers ngo1996/1997, ufike kwiMaritzburg United nolwazi olujulile ekuphathweni kweqembu.
ULuthuli, ofike ngo-2004 kuleli qembu laseMphithi, kuzoba okokuqala ezithola enza umsebenzi ongajwayelekile njengoba lilungiselela umdlalo wamanqamu weNedbank Cup ngempelasonto.
I-United izoqhuthana neFree State Stars kulo mdlalo ngoMgqibelo ngo-7 ebusuku eCape Town Stadium, eKapa.
Ngaphandle kokuqinisekisa ukuthi ijezi lokujima nelokudlala limi ngomumo, amabhola ngisho amabhodi okushintsha asetshenziswa onompempe, uLuthuli uzokwenza isiqiniseko sokuthi abadlali bakhe babukeka njengezingcwasimende.
Sekufana nosiko ukuthi uma amaqembu eya emidlalweni yamanqamu, abadlali badlubhe amasudi. NoLuthuli ekhuluma neSolezwe ekuqaleni kwesonto ukuvezile ukuthi usebalungiselele abadlali bakhe.
“Njengamanje sengilinde ijezi lowamanqamu. Ngimele namasudi futhi ngoba sesibathathile osayizi babo. Osekusele wukuthi sibanikeze ngononina uma esefikile,” kusho uLuthuli.
Ngosuku lomdlalo ungomunye wabantu abazofika enkundleni. Njengoba iTeam of Choice izobe ingosokhaya kuwumsebenzi wakhe ukuqinisekisa ukuthi amabhola okujima nawomdlalo, ama-makha okujima namabhodi onompempe okushintsha abadlali, kulungile.
ULuthuli, odabuka eMlaza kwa-Q, akafuni kube khona okuzophazamisa iqembu kwazise naye uyibheke ngabomvu indondo yegolide yeNedbank Cup.
“Nginesiqiniseko sokuthi yimina engijabule kunawo wonke umuntu. Ngizobe ngiqeda iminyaka engu-14 eqenjini, siwa sivuka nalo. Le ndondo kumele siyiwine. Izoba ngebaluleke ukuzedlula zonke,” kusho uLuthuli.
Ukhuluma kanjena nje, ugabe ngendebe yeligi ayinqobe neRangers, isicoco seBP Top 8 nese-ABSA Cup azidle neSantos. Ngenxa yalo msebenzi wakhe athe uwuthanda ukufa, useke waba ngisho kwiNdebe yoMhlaba neBafana Bafana eKorea/Japan ngo-2002.
Indlela asemdala ngayo eqenjini uLuthuli, ngisho umqeqeshi uFadlu Davids ufikele kuyena esengumdlali.
“Empeleni ngiqale ukumazi yena esengumfana omncane eKapa njengoba lapho engangihlala khona kwakuseduze kwakubo. Nalapha eqenjini ufikele kimina. Manje usengumqeqeshi wami kumele ngimhloniphe. Ungimangazile indlela enza ngayo. Okuningi ukufunde ku-Ernst Middendorp kodwa umehluko wukuthi yena uphansi, akathethi. Ngisho kuthiwa siyahlulwa uyakwazi ukhuluma nabadlali kahle abatshele ukuthi abangayeki indlela yethu yokudlala futhi muhle ekuhleleleni imidlalo.
“Usebenzisana kahle nanomnewabo (uMahier). Lonke nje ithimba lenza umsebenzi oncomekayo ngisho umqeqeshi wonozinti (u-Arthur Bartman), ohlaziya ama-video, ngisho ithimba lodokotela njengoba abadlali bengazange bahlushwe wukulimala. Yingakho ngithi le nkomishi izoba ngesemqoka kakhulu,” kusho uLuthuli.
Isithombe: BONGANI MBATHA AFRICAN NEWS AGENCY (ANA)
UZOLA Luthuli oyi-kit manager yeMaritzburg United ungomunye walabo asebebe seqenjini iminyaka eminingi